Yini Okusha ku-iOS 15.1 | Izindaba ze-iPhone
Yini okusha ku-iOS 15.1
U-Ignacio Sala | 26/10/2021 10:40 | iOS 15
Njengoba i-Apple imemezele ngesonto eledlule, isibuyekezo sokuqala esikhulu se-iOS 15, i-iOS 15.1, sikhishwe izolo ntambama (isikhathi saseSpain), isibuyekezo esifika ezinye zezici ezilindelwe kakhulu ukuthi i-Apple ayizange iyifake enguqulweni yokugcina yale nguqulo kanye nezinye zalezo ezifinyelele i-iPhone 13 entsha.
Uma ufuna yazi zonke izindaba esezivele zitholakala nge-iOS 15.1 ne-iPadOS 15.1 ngemva kokuthuthukela enguqulweni yakamuva esivele ikhona, ngikumema ukuthi uqhubeke nokufunda.
2 I-ProRes (iPhone 13 Pro)
3 Umsebenzi weMacro
4 Ukuthuthukiswa kokuphathwa kwebhethri le-iPhone 12
5 I-HomePod isekela i-Lossless Audio ne-Dolby Atmos
6 Uhlelo lokusebenza lwasekhaya
7 Umbhalo obukhoma ku-iPad
9 Ikhadi lokugoma ku-Wallet
10 Ukulungiswa kwamaphutha
11 IMacOS 15 Monterey isiyatholakala
I-SharePlay iwumsebenzi owenzelwe wona vumela abantu ukuba basondelane ndawonye cishe sibonga i-FaceTime, isici esizalwe ngenxa yesidingo sobhubhane lwe-coronavirus ukuxhumana nabangane bethu nomndeni.
Lesi sici sivumela ababambiqhaza ukuba babambiqhaza dlala umculo, uchungechunge namamuvi ngokuvumelanisa futhi kanjalo baphawule ngakho njengokungathi bandawonye ekamelweni elilodwa.
Ngaphezu kwalokho, futhi kuvumela yabelana ngesikrini sakho se-iPhone, i-iPad, noma i-Mac nomunye umuntu, isici esikahle sokuhlela uhambo, i-hangout nabangani, ukusiza othile ukusetha noma ukuxazulula inkinga idivayisi yakhe.
I-ProRes (iPhone 13 Pro)
Ngokwethulwa kwebanga le-iPhone 13, i-Apple yethule inketho entsha yevidiyo ebizwa ngeProRes, a ifomethi yokuqoshwa kwevidiyo esetshenziswa ekurekhodweni okuphrofeshinali okunikeza ukwethembeka kombala okuphezulu nokuminyanisa okuphansi kwevidiyo, imininingwane emincane kakhulu elahlekile.
Lo msebenzi itholakala kuphela ku-iPhone 13 Pro naku-iPhone 13 Pro Max, abasebenzisi abangakwazi ukurekhoda kuphela, kodwa futhi bahlele futhi babelane ngamavidiyo adalwe kumadivayisi abo. Lo msebenzi uyatholakala ngaphakathi kweKhamera - Amafomethi - izilungiselelo zohlelo lokusebenza lwe-ProRes.
Uma ufuna rekhoda nge-4K ku-30 ​​fps, udinga i-iPhone 13 Pro engu-256 GB noma ngaphezulu, njengoba kumodeli yesitoreji esingu-128 GB, lo msebenzi ukhawulelwe ku-1080 ku-60 fps. Lokhu kungenxa yokuthi, ngokusho kwe-Apple, umzuzu owodwa wevidiyo ku-10-bit HDR ProRes ithatha i-1.7 GB kumodi ye-HD kanye ne-6 GB ku-4K.
Omunye wemisebenzi emisha etholakala ngekhamera ye-iPhone entsha ene-iOS 15.1 yi-macro. Nge-iOS 15.1, i-Apple yengeze ukushintshela kuyo khubaza i-auto macro.
Uma kungasebenzi, uhlelo lwekhamera ngeke ishintshe ngokuzenzakalela iye ku-Ultra Wide Angle enensayo izithombe namavidiyo amakhro. Lo msebenzi omusha uyatholakala ngaphakathi kokuthi Izilungiselelo - Ikhamera.
Ukuthuthukiswa kokuphathwa kwebhethri le-iPhone 12
I-iOS 15.1 yethule ama-algorithms amasha ukwazi isimo esiqondile sebhethri, ama-algorithms anikezela isilinganiso esihle kakhulu somthamo webhethri ngokuhamba kwesikhathi ku-iPhone 12.
I-HomePod isekela i-Lossless Audio ne-Dolby Atmos
Akuyona kuphela i-iPhone ethole izindaba ezibalulekile nge-iOS 15.1, njengoba i-HomePod iphinde yavuselela isofthiwe yayo yaba ngu-15.1, ingeza umsindo ongalahleki nokusekelwa kwe-Dolby Atmos ngomsindo wendawo.
Ukuze unike amandla lo msebenzi omusha, kufanele sikwenze ngohlelo lokusebenza lwasekhaya.
Uhlelo lokusebenza lwasekhaya
Kungeziwe ama-trigger amasha e-automation ngokusekelwe ekufundeni okuvela ekukhanyeni okuhambisana ne-HomeKit, ikhwalithi yomoya noma inzwa yezinga lomswakamo.
Umbhalo obukhoma ku-iPad
Umsebenzi we ukuqashelwa kombhalo, Umbhalo Obukhoma, otholakala ngekhamera eku-iPhone, manje usuyatholakala naku-iPadOS 15, isici esikuvumela ukuthi ubone imibhalo, izinombolo zocingo, amakheli ...
Lesi sici siyatholakala kuma-iPads nge Iprosesa ye-A12 Bionic noma ngaphezulu.
Kungeziwe izenzo ezintsha esezihleliwe kakade esivumela ukuthi sibeke ngaphezulu umbhalo ezithombeni noma kumafayela ngefomethi ye-GIF.
Ikhadi lokugoma ku-Wallet
Abasebenzisi abathole umuthi wokugomela i-COVID-19 bangasebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-Wallet ukuze gcina futhi ukhiqize ikhadi lokugoma ezingaboniswa noma kuphi lapho kudingeka khona ngaphandle kwesidingo sokuthwala isitifiketi somzimba ephepheni.
Lo msebenzi okwamanje itholakala kuphela kwezinye izifunda zase-United States.
Kulungiswe inkinga eyethulwe uhlelo lokusebenza lwezithombe ngesikhathi bonisa ngokungalungile ukuthi isitoreji besigcwele uma ungenisa amavidiyo nezithombe.
Inkinga evele ngesikhathi kudlalwa umsindo ovela kuhlelo lokusebenza okungenzeka kumiswe isikhashana ngenkathi kukhiya isikrini.
Nge-iOS 15.1 iphinde yalungisa inkinga ukuthi ayivumelanga idivayisi ukuthi ithole amanethiwekhi e-Wi-Fi atholakalayo.
IMacOS 15 Monterey isiyatholakala
Kanye nokukhishwa kwe-iOS 15.1, i-Apple ikhiphe i- inguqulo yokugcina ye-macOS Monterey, inguqulo entsha eyethula ezinye izici ezitholakala ku-iOS njenge-SharePlay.
Okwamanje, umsebenzi Ukulawulwa kwendawo yonke, umsebenzi okuvumela ukuthi unwebe ukuqapha kusuka ku-Mac kuya ku-iPad, awutholakali kodwa uzofika emasontweni azayo, ngokusho kwe-Apple ezinsukwini ezimbalwa ezedlule.
iMacOS Monterey iyakwamukela Izinqamuleli, imodi yokukhonkolo kanye neSafari evuselelwe ye-iOS 15. Le nguqulo entsha iyahambisana namakhompyutha afanayo ne-macOS Big Sur.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iOS » iOS 15 » Yini okusha ku-iOS 15.1
Uzikhubaza kanjani izexwayiso zokuqeqesha ku-Apple Watch
I-Apple Fitness + ne-Apple One Premiere iyatholakala kusukela ngesonto elizayo